वहाँ ई-वाणिज्यको लागि उच्च पीआर प्राधिकरण ब्याकलिङ्कहरू निर्माण गर्ने कुनै सिद्ध तरिका हो?
आइपुगेको छ - उच्च पीआर प्राधिकरण ब्याकलिङ्कहरू निर्माण गर्न कहिल्यै सजिलो काम भएको छैन, विशेष गरी ई-वाणिज्य वेबस्टोरको बारेमा।. कुरा यो हो कि अब पुरानो शैली प्रविधिहरू यति राम्रो प्रदर्शन गर्न असफल भएका छन्. अधिक के हो - तपाईंको ई-वाणिज्य परियोजनामा ​​हानिकारक हुन सक्छ. यसैले, तल म धेरै प्रमाणित फ्रेमवर्कहरू सामाग्री र आधारभूत माध्यमको सफल माध्यमको साथमा तपाईंको वेबस्टोरको लागि उच्च PR प्राधिकरण ब्याकलिङ्कहरू प्राप्त गर्न को लागी जाँदैछु।. यहाँ तिनीहरू निश्चित - निश्चित गाइड, विशेषज्ञ roundups, र अतिथि ब्लगिंग.
तर अरू केही गर्न अघि यसलाई फेरि एकपटक फेरि जाँच गरौं - कुन ई-वाणिज्य सामग्री मार्केटिंग खडा छ. सम्झनुहोस्, एसईओ प्रायः हामीलाई बताउँछ कि गुणस्तरको सामग्री राजा हो, ठीक छ? त्यसैले लिङ्क निर्माण गर्दछ! मेरा मतलब यो केवल ध्वनि सामग्री सिर्जना गर्ने बारेमा होइन. तपाईंको सामग्रीसँग उच्च पीआर प्राधिकरण ब्याकलिङ्कहरू कमाउनको लागि, तपाईंलाई यस्तो योजना चाहिन्छ:
तपाईंको सामग्री लक्ष्यहरू पहिचान गर्न - ट्राफिक र रूपान्तरण बीच चयन गर्नुहोस्;
तपाईंको "आदर्श ग्राहक", उहाँका आवश्यकताहरू, भावनाहरू र मनसायहरूको बारे सोच्नु होस्;
उद्योग प्रभावकारिताको खोजी र उनीहरूको पहुँच;
सबै भन्दा सान्दर्भिक सामग्री को आकार दिनुहोस र यसलाई भिजुअल रूप देखि अपील गर्दछ;
लाइभ जान भन्दा पहिले सामग्री अनुकूलनमा काम गर्न नबिर्सनुहोस्;
तपाईंको सामग्रीको मुख्य आकारको प्रवर्द्धन र पुनर्मूल्यांकन गर्नुहोस्;
भविष्यका प्रकाशनहरूको लागि आवधिक पोस्टिंग कार्यक्रम बनाउनुहोस्.
परम परिभाषात्मक मार्गदर्शिकाहरु
उच्च PR प्राधिकरण को निर्माण गर्न को लागि अधिक उपयोगी छैन एक राम्रो बनाइयो र ठीक देखि अनुसन्धान को तुलना मा पूर्ण निश्चित गाइड. मेरा मतलब छ कि जब कसैले उद्योगको वास्तविक आवाज सुन्न आवश्यक छ - किन यो तपाइँ पछि नहुनु हुँदैन? तपाईलाई यहाँ सबैलाई आवश्यक छ केहि समय र प्रयास गर्न को लागी. निराश महसुस नगर्नुहोस्, तथापि, तपाईं वास्तवमा एक अद्वितीय भ्वाईस हुनु हुँदैन. केवल आफैलाई एक ट्युटर वा क्यूरेटरको रूपमा सोच्नुहोस् - सबै सँग एकै साथ खिच्नुहोस् र मान्छे लाई मात्र राम्रो भन्दा राम्रो दिनुहोस. यदि तपाईं अझै पनि आफ्नो समयको यो सट्टा गम्भीर लगानीलाई विचार गर्दै हुनुहुन्छ, म तपाईंलाई आश्वासन दिन्छु कि धेरै पटक एक ठोस गाइडले तपाईंलाई प्राकृतिक उच्च पीआर प्राधिकरणलाई लामो समयसम्म ब्याकलिङ्क ल्याउनेछ।.
विशेषज्ञ राउन्ड अप उच्च उच्च प्राधिकरण ब्याकलिङ्कहरू मात्र प्राप्त गर्न एक सिद्ध तरिका होइन तर सफल सफल प्रदर्शन र तपाईंको लक्षित दर्शकहरूको साथ बलियो सम्बन्ध निर्माण गर्नुहोस्।. र सबै चीजले तपाईलाई सोच्नु भन्दा सजिलो छ किनकि चाल सही र संकीर्ण समस्या वा समस्या छान्नु हो. अर्को, तपाईंको विशेषज्ञहरूको जवाफ दिनको लागि केहि प्रश्नहरू छनौट गर्नुहोस्. त्यस तरिका, ध्यान राख्नुहोस् कि तपाईंको उद्देश्य एक निश्चित जवाफको लागि विस्तृत उत्तर वा चरण-दर-चरण समाधान उपलब्ध गराउनु हो. एक चोटि गरेपछि - उद्योगलाई सम्बद्ध विशेषज्ञहरूबाट इनपुट निमन्त्रणा गर्नुहोस्, र तपाईंले गर्नुभयो.
विशेष रूप देखि अनलाइन प्रकाशन को लागि अनुकूलित एक उच्च गुणवत्ता वाला सामग्री बनाइयो संधै केहि उच्च पीआर प्राधिकरण बैकलिंक प्राप्त गर्न को एक निश्चित तरीका भएको छ. पुरानो स्कूल लेख मार्केटिंग संग, अतिथि ब्लगिंग एक पारस्परिक लाभकारी सम्बन्ध हो जो संधै दुवै पक्षहरु लाई अवसर को धेरै अवसर दि्छ।. त्यहाँ तपाईंको मुख्य सामग्री फ्रेमवर्कहरू खेल्न आउँछ. अनि तपाइँलाई यहाँ आवश्यक छ तपाईंको लक्ष्य उद्योग प्रभावकारिता संग एक सकारात्मक सम्बन्ध विकसित गर्न को लागी, उनलाई आफ्नो सामाग्री प्यार, यसलाई पोस्ट गर्नुहोस, र निश्चित रूप देखि बहुमूल्य उच्च पीआर प्राधिकरण को एक वेबसाइट ले आफ्नो वेबसाइट Source .